ကြောင်စာ ပြောင်လျှာ Cat News | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ကြောင်စာ ပြောင်လျှာ Cat News	8
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 15, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News | 8 comments
တလုပ်ပြည်ဖက် မှားကျသော ဗုံးသည် မိတ်အင်ချိုင်းနားဖြစ်၍ ၎င်းတို့တွင် အပြစ်မရှိကြောင်း၊ တလုတ်လေယာဉ်ကို စက်နှိုးရန်ပင် လူအင်အားသုံး တွန်းထုတ်ရဂျောင်း လေဗိုလ်ချုပ်ရဲမိုးမှ ကာကွယ်ပြောဆိုသီ။
ဗုံးမှားကြဲချခံရ၍ ဆိတ်စိုးနေသော တလုပ်အစိုးရ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေယံ စစ်လမ်းနီးနှင့် ဖွတ်အောက်ဆွဲများ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် နေဝမ်းနီ ပရိုဖိုင်း ဓါတ်ပုံအစား အောက်ဖော်ပြပါ ပုံအသစ် ပြောင်းလဲရန် ကုတ်ခြာကာချုပ် မအလ မှ ညွှန်ကြားထားသည်။
တရုတ်ကြီးကျွေးမည့် နေပေါက်ဆီ (ဓာတ်ပုံ -ဖဘ)
ရိုက်နှက်၊ဖမ်းဆီး အဖြိုခွဲခံရသော ကျောင်းသားသပိတ်အား ဆက်လက် ပြစ်တင်ရှုံ့ချ ပျက်ရယ်ပြု နေသူများတွင် အမေ၊အမေနှင့် အော်နေသူများ၊ ဒီမို ကြွေးကြော်သူများ ပါနေ၍ ဘွားဒေါ်ဂျီးနှင့် ရှစ်ပူးများ အရေးဘော် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဖွတ်အစိုးမရ အကြမ်းဖက်တပ် လက်ပတ်နီများအား ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန် ဆိတ်စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ ပေါ်ထွက်လာရာ မြန်တျန့်နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် ထူးခြားဂျက် တရပ်ဖြစ်ကြောင်း အချောင်သမား သပ်ပါတီမှ ထုပ်ပျပျန်သီ။
ဂဇွတ်ရွာဒွင် ဆိတ်စွမ်းအားရှင်များနှင့် အချောင်သမား သပ်ပါတီဝံများ ကိုယ်ဂျိုးစီးပွား ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့မိသွားရာ ကိုယ်ဂျိုးမဖက် အနစ်နာခံ ရဲရဲတောက် ဒီမိုသမားများ ကျောင်းသားကို လုံထိန်းဝိုင်းရိုက်သလို အလူးအလိမ့် ခံနေရသီ။
မြန်တျန့်သမဒ ဘပြောင် မလေးဂုံပြုခံတပ်ဖွဲအား ဦးညွှတ်နေသည့်ပုံမှာ ဝါဒဖြန့် လုပ်ကြံမှု သက်သက်ဖြစ်ကြောင်း ဖဦးထုပ်ဝံဂျီး ဦးယဲထွတ်မှ ကွာလံကွာပူ ဗဟိုဗလီကြီး သောကြာနေ့ ဝတ်ပြုပွဲတွင် ပြောကြားသီ။
သမဒ ပညာသင်ဆု ရေးဖြေ အောင်သွားသော စက်ဆီမော်ဒယ်လ် ဇွံသင်ဇာ နှုတ်ဖြေတွင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့နှင့် တင်အပြကောင်းပါဂ သေခြာဗောက် အရွေးခံရမြည် ဖြစ်သီ။
ဒုတိယသက်တမ်း ဖွတ်အစိုးမရ ဝံဂျီးအဖွဲ့စာရင်းတွင် အမျိုးသားပညာရေး ပဲ့ကိုင် ပညာရေးဝံဂျီးအဖြစ် ဖွတ်လွှတ်တော်အမတ် ဘူးလက် အူးလှဆွေ အားလျာထားဂျောင်း သတင်းရရှိသီ။
လောက်ကိုင်အရေးတွင် စစ်တပ်ဖားပြီး ကျောင်းသားအား မျက်နှာလွဲခဲပစ်လုပ်ကြောင်း အစွပ်စွဲခံရသူ ရုပ်ရှင်အစီးအရုန်း ငှက်ကထ လူမင်းက တုံ့ပြန်သည့် အနေနှင့် ကျောင်းသား၊စစ်သား ဇာတ်နှစ်ရုပ်ပါ ရုပ်ရှင်ရိုက်မြီ ဖြစ်ရာ မေမြို့စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း ဝါဒဖြန့်ကားဖစ်နေသီ။
မြန်မာမီဒီယာနှင့်ဂျာနယ်အသင်းမှ ပြန်ကြားရေးဝံဂျီးဌာန ပြုလုပ်သော မီဒီယာကွန်ဖရင့်အား သပိတ်မှောက်ရန် စီစဉ်ထားရာ ပွဲမပျက်စေရန် လေရဲမိုးနှင့်အဖွဲ့ အစားထိုး တက်ရောက်ရန် ပြန်ကြားရေးမှ ညွှန်ကြားထားသီ။
ဒီမို ရှေ့နေဦးရောဘတ်စန်းအောင်မှ ဒီဗွီဘီ စဂါးစစ်ထိုးပွဲတွင် ပါဝင်ရန် ကျောင်းသားသပ်ိတ်တပ်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြိုခွဲပါသည် စိုသူအား စိမ်ခေါ်လိုက်ရာ ဖအူးထုပ်ဝံဂျီး အူးရဲထွဋ် သူတယောက်ထဲ မဟုတ်ကြောင်း ပြောသီ။
ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲအား အမည်မသိ လူရမ်းကားများ ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုအတွက် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့လိုက်ရာ ရုံခန်းကို လုံခြုံရေး ဆိတ်ချရသော ကြည့်မြင့်တိုင် တဖက်ကမ်း လက်ပတ်နီကျေးရွာတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သီ။
မြန်တျန့် နိုင်ငံသား တဦးလျင် ငါးသိန်းတင်နေသော နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ ဝံထုပ်ဝံပိုး သက်သာဇေယံ တလုတ်ပြည်သို့ တွင်းထွက်သယံဇာတများ ဆွေးမျိုးပေါက်ဖော်ဈေးဖြင့် ဆက်လက် ရောင်းချသွားရန် စီစဉ်ထားဂျောင်း ကြေငြာသီ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပညာရေးဝံဂျီးအဖြစ် ဘူးလက် လွှတ်တော်အမတ် အူးသိမ်းဆွေ ဆိုတာ ဘယ်သူတုန်း။ nld ကလား။ သူက မျှ စ်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတာနော်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ပညာရေးဝံဂျီး လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် လုံးဝမထောက်ခံဘူး။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဟီးဟီး.. မှားရို့.. ပြင်ရိုက်ပီ။
kai says: တော်လှန်ရေးနေ့နှင့်နီးလာသည်နှင့်အမျှ … မြန်တျန့်ပြည်တွင် လေတပ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာရာ.. Made in FB လေသေနတ်သည် အရောင်းရဆုံးဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲကြောင့် ပေါက်စီစားနေသူပေါက်ဖေါ်၎ဦးသာ ကျဆုံးသည်။
naywoon ni says: ​တောပီဗျာ ​ပေါက်​စီမစား​တော့ဘူး ။ ​တော်​ကြာ​ပေါက်​စီ စား​နေဒုန်း ဗုံးကျမှဖြင့်​
က​ကျောင်​ဂျီး ​ရေ ခင်​ဗျား ပို့စ်​ဖတ်​​နေတာနဲ့ သုံးနာရီထိုး​တော့မယ်​ အိပ်​ချင်​စိတ်​​တောင်​ ​ပျောက်​သွားဘီ ရယ်​​နေရတာနဲ့ ။ အဲ့အ​ရေးအသားနဲ့ မြန်​တျာန့်​မှာ ဂျာနယ်​ ထုတ်​ပါ့လား ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: မနက်က တင်
ရဲမိုးးနောက်လိုက် ကော်မန့်တွေ ဖတ်ပြီးးးး ရီနေရတာာ
Alinsett@Maung Thura says: ကျနော်တို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ တယောက် အကြွေးငါးသိန်းတင်နေတယ်…
အဲ့ဒါ ပြန်ဆပ်ဖို့ အရေးအတွက်… အဘတို့ရယ်… သူများနိုင်ငံက ငွေးလေး နည်းနည်းလောက် ချေးပေးပါလား။
တိုင်းပြည်က ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲပဲ မေးတော့မည်။
တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်က ဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့ မမေးတော့ပါ…
တိုင်းပြည်က ကိုယ့်ကို ဘာတစ်ခုဆိုတစ်ခုမှ အာမခံချက် မပေးနိုင်ခဲ့တာများနေတော့..
တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ကို ကျေးဇူးတင်ချင်လို့… မေးပါရစေ..
တိုင်းပြည်က ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်ပေးမလဲ…
မြစပဲရိုး says: အဲ့ဒီ ရဲမိုး ဆိုတာ ကို မသိပါလား။
ဟိုတစ်ခါ မောင်စေတန် ဆိုတာလဲ ရွာထဲ က ကိုယ်တော်များ ဝိုင်းဟား ကြမှ သိတော့တယ်။
နီ သများ တွေ ကိုဘဲ ပြောင်နေ။
တစ်ခြား မာရသွန် သတင်း လေးများ အကြောင်းတော့ မပြောဝူးလား။ နာ့ ကို ဆဲရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆဲ နော်။ lol:-))))
Mr. MarGa says: တရုတ်ပြည်ကို ရောင်းဖို့